IZY VALO MIANAKA - Zoana15 - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
IZY VALO MIANAKA - Zoana15
… hiakatra aty Antananarivo, hitady fiainana vaovao, hiala amin’ny fahasahiranana sy ny fahantrana tany Ambanivolo. 15 taona izao i Riana kilasy fahatelo amin’ny garabola, manana zandry dimy izy, roa volana ny farany indrindra ary ilay zokin’ity farany dia vao herintaona mahery monja, izy no mitaiza azy ary efa izy foana no nitaiza an’ireo zokiny teo aloha ireo, indraindray aza izy dia tsy afaka mianatra mihintsy satria tsy maintsy mandeha mikarama ny Reniny noho ny tsy fahampiana, dia izy daholo no mitaiza an’ireo zandriny mbola tsy mianatra.
“Omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay…”, sasa lamba, fibatana entana, varobarotra madinidinika no karama ataon’ny Ray aman-dReniny. Ny hanina anio, tadiavina anio, ny ampitso koa torak’izay, na kely na betsaka azo androany dia lany androany avokoa izany, dia rahampitso indray mitady ho an’ny rahampitso, mahita dia homana, tsy mahita dia mandry fotsy, izay no fiainan’ireo Ray aman-dReniny.
Labozia mitsilopilopy no manazava ilay trano hazo itoeran’izy valo mianaka rehefa hariva iny ny andro, tsy ahenoana inon’inona afa-tsy ny tomanin’ny ankizy kely miandry sakafo hariva. Afo kitay no mbola fampiasan-dry zareo ary mandram-pahamasaky ny sakafo dia mamindro eo miaraka amin’ny Ray aman-dReniny ireo lehibehibe ary dia raikitra ny karajia ary avy eo dia faranana amin’ny zafindraony mahangolingoly fanahy, izay no ahafantarana fa efa hatory izy valo mianaka, ary dia tena manaitra ny manodidina tokoa ny feo mangan’izy mianakavy kely ireo.
Feo manga harivariva ahitana taratry ny fahasambarana anaty na dia tsy mahafinaritra ny maso loatra aza ny mahita ny fikorontanan’ny fiainan’izy valo mianaka rehefa maraina iny ny andro.
Vita ny androany, inona indray no avoaky ny ampitso??! Dia ho sanatria ve hijanona hatreo amin’ny fahaizana mamaky teny ihany i Riana ? …
Ray ô, ny anio sy ny ampitso izay anao, raha sitrakao, mba omeo azy koa …
Sokajy : Alahelo, Fahantrana, fiainana, Fiaraha-monina
Mpanoratra : Zoana15
Nampiditra : zoana15
Daty : 10/07/2015
Mpamangy : 1195
Mankafy : 2
TIAKO SADY HALAKO